Ebusuku efulethini elifana nesitayela selogi elinamagumbi okulala amathathu eduze komnyango wesitimela esingaphansi, elibheke umbono wesondo weFerris phambi kwamafasitela amakhulu asuka phansi ukuya ophahleni. - I-Airbnb
Ebusuku efulethini elifana nesitayela selogi elinamagumbi okulala amathathu eduze komnyango wesitimela esingaphansi, elibheke umbono wesondo weFerris phambi kwamafasitela amakhulu asuka phansi ukuya ophahleni.
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-柚子
Izindonga ezimhlophe kanye namapulangwe aphansi ekamelweni lokuphumula kuyahambisana, ngefenisha yokhuni, nokuhlobisa izitshalo eziluhlaza kanye nemidwebo yobuciko, okwenza kube nomoya ophilayo futhi olula. Hlala etafuleni lokudlela elide lamapulangwe nomndeni wakho ukuze nijabulele ukudla futhi nihlanganyele ukuphila okujabulisayo. Unyathela inhlabathi enemigqa enokhuni, uhlezi esihlalweni esilengayo kuvulandi, ucosha incwadi futhi uyifunde ngokucophelela, ungabona isibhakabhaka esikhanyayo esinezinkanyezi kanye nesimo sesondo leFerris uma ubheka phezulu.
Izindonga ezimhlophe kanye namapulangwe aphansi ekamelweni lokuphumula kuyahambisana, ngefenisha yokhuni, nokuhlobisa izitshalo eziluhlaza kanye nemidwebo yobuciko, okwenza kube nomoya ophilayo futhi olula. Hlala etafuleni lokudlela elide lamapulangwe nomndeni wakho ukuze nijabulele ukudla futhi nihlanganyele ukuphila okujabulisayo. Unyathela inhlabathi enemigqa enokhuni, uhlezi esihlalweni esilengayo kuvulandi, ucos…
4.88 (izibuyekezo ezingu-103)
Eduze kwesiteshi esingaphansi kwe-Houjiatang. Kukhona i-Helong Stadium, i-Taiping Street, i-Wuyi Square, njll. eduzane. Isiteshi esingaphansi komhlaba sinikeza ukufinyelela okuqondile eChangsha South, Huanghua Airport kanye nesiteshi sikaloliwe.
Ibanga ukusuka e- Changsha Huanghua International Airport
Imizuzu engu-34 oyihamba ngemoto uma ukuminyana kwezimoto kungekho emgwaqeni
U柚子 Ungumbungazi ovelele
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$30.